Kaligaa Ma tihid – JOORNAAL
January 3, 2021 ~ joornaal
By Cali Cusmaan Cilmi ccusmaan@gmail.com
Waxaad aqrisaa adiga oo mahdin iyo shukri uu qalbigaaga ka buuxo.
Waxaad aqrinaysaa qormo aan adiga kuu qoray, oo aan kaaga soo gudbinayo meel kaa durugsan kumanaan kiilomitir meesha aad joogto. Taas oo uu Allah oo keliya mahadeeda leeyahay waayo asaga ayaa wuxuu qasbay in kumanaan ingineero, kumanaan khubarada kombuyuutarka, kuwa korontada iyo shaqaalaha warshadaha soo saara telefoonada iyo kobuyuutarada noo carbiyay isla markaana qasab ka dhigay in ay soo saaraan Internetka iyo aalada aan u adeegsaneyno ee sahashay in aad aqriso qormadan.
Waad nooshahay waayo waxaad cuntaa, cabtaa wax ay soo saareen oo ka soo shaqeeyeen, isla markaana dalkaaga ay keeneen kumanaan qof oo kala duwan. Waxaad ku nooshahay guri aalada uu ka sameysanyahay ay ka soo shaqeeyeen soona saareen kumanaan dad oo kala gedisan. Markii aad xanuunsato waxaad u tagtaa dhaqtar isla markaana kuu qora daawo ay soo sameeyeen boqolaal qof oo kala gedisan.
Kolkii aad dhalatay waxba maadan qabsan kareyn adiga oo aysan dad faro badan oo qoyskaaga sida aabe, hooyo, walaalayaal, adeero, eedooyin, habaryaro, abtiyaal, ayeeyooyin, ilma adeer iyo reerkiina oo dhan ay qayb ka ahaayeen koritaankaaga.
Waxaad lahayd deris, xaafad, saaxiibo, macalimiin, dal iyo umad kugu caawiyay in aad noqoto qofka aad maanta tahay. Waxaa wax barashadaada ka soo qayb qaatay kumanaan dad ah, kuwo buugaagta qoray, kuwa dhiga ee macalimiinta ah, kuwa iskuulka nadaafadiisa, maqaayadiisa iyo maamulkiisa ka shaqeeya.
Jiritaankaaga oo dhan waxaa uu xiranyahay dad marka la isku daro kor u dhaafaya malaayiin qof ilaa hadana weli ku garab taagan kuna garab taagnaan doonto ilaa qabriga lagugu soo aasi doono.
Hadaba soo ma mudna in aan Allah noo sakhiray intaas oo dhan aan Shukri dhamaystiran oo ceeb lahayn aan ku shukrino. Soo nooma haboona in aan intaas wax noo tareysa intii aan ka gaarno aan dhahno waad mahadsantihiin. Soo nooma haboona in aan ka qaybqaadano in aan bulshadeena wax u tarno oo weliba aanaan dadkeena, dalkeena iyo diinteena aanan kala qoqobin ee gacamaha is qabsano, wax isku tarno, is wanaajino oo aan u jeclaano qofka walaalkeen ah, gobolka walaaleheen ay deganyihiin wanaag iyo horumar mar walba. Soo ma wanaagsana in aad baari u noqono waalidka intaa nala soo xarbinayay ee intii karaan kooda ahaa ama aqoontooda ahayd nala soo dadaalay.
Soo ma haboona in aan garano in aanan kaligeen ahayn ee marwalba khalgiga Allah uu noo hogaamiyay ay danteena ka shaqeynayaan xataa anagoo ka war ahayn.
Allahu Malakal Xamdu Walakal Shukru
‹ PreviousNatiijadu waa daahdaa
Next ›Sidee Singapore Musuqmaasuqa ku ciribtirtay?